AquaSlide | Mvura yemasiraidhi inogadzira - mutambo wekutamba - aquaslide.fr
(+ 33) 960_351 830 (yemuno kufona mutengo)
Yangu yekutengera ngoro
Bhurocha udza mashoko kotesheni Special Offers kugoverana Newsletters
Basa revatengi The company Kubatanidzwa kwedu Dhizaini yekugadziraIva muparidzi Kuchengeta kudzora dhirivahari Nzvimbo yekudhinda Recrutement Yega data Quote Contact us
NEWS uye CONCEPT Slide
Kushushikana - Kuita - Chengetedzo
KUMBIRA BHUKU RAKO
ZVAKANAKA ZVAKANAKA uko izvi Mvura yakadzika inoganhurirwa neumbozha uye tekinoroji. Iyi musasa inozvipa iyo inoshamisa gem kana yakanyanya kunaka ondomoka hwemvura Inoita nzvimbo yayo pakati pemireza yechirongwa chakanakisa. Tanga paAquaSlide zvakasikwa uye uwane iyo yakakwana kwazvo mhando yemidziyo yemumvura uye mitambo inonakidza.
- Tsvaga iyo yakafararira renji ye ondomoka hwemvura uye bvunza yedu katarogu.
Paki yemvura inotsvedza
KUDZIDZA NEZVIYero zveizvi ondomoka paki yemvura AquaSlide. Iyo mbiri uye mavhoriyamu ayo anoipa iyo yakasarudzika hunhu. Pasina kuenzana, izvi ondomoka paki yemvura chiratidziro chenguva yayo uye zvirokwazvo bhenji maererano nemasikirwo uye kugona kubata.
- Kumbira iyo AquaSlide renji uye yayo masiraidhi paki yemvura mune ergonomics pamwe nenguva ...
IYE wega UYE UNIQUE, iyo amalgam ye Pool slide iro rekuda chinzvimbo chinonetsa kushinga kwekuvaka masisitimu mune mamiriro ekudzikama. Runako rwepanyama rusingaenzaniswi, izvi ondomoka dziva inoratidza chishuwo chekubva kure netsika, nekuti kutiza mutsika kwakakosha kuti mufaro wevana.
- Isa iyo siginicha yeAquaSlide uye yemhando yepamusoro padziva kubva kune inozivikanwa nyika inogadzira
ZVAKASIYANA ZVAKASIYANA, Mutambo wemvura yakasimwa munzvimbo inoshamisira, inosimudzira vechidiki kupinda mukufemereka kunoshamisa. Inoshamisira nekuvakwa kwayo, uyu mutambo wemvura une mukurumbira wakakonzera kushushikana uye nekukurumidza ikave iyo yemitambo yemitambo yakawanda yevana. Kubatanidzwa kwemasiraidhi emvura, weir uye akasiyana midziyo. Flip-flop munzvimbo yakachengeteka, humbowo hunopesana nekuwedzeredza kwavo, kwavo kwekunyepedzera fungidziro uye kunyepedzera.
- Kumbira bhurocha rako jeu hwemvura kugovana mufaro.
RARETE LIMITED, vanyoreri vari kukwenya izvi Chimiro-chakagadzirwa mutambo mamiriro kune kusanganisa kusinganzwisisike. Yakagadzirirwa kunakidzwa kusingaenzanisike, ichi chinoshamisa mutambo wevamiririri wakagadzirwa nechengetedzo hurusa nehofisi yedu yekugadzira, inobvumira kuwanda kwakasangana kunopa pamusoro peiyo renji pakupedzisira inodhura. Chinhu chinoshamisa chekugadzirwa kwetekinoroji kwakasiiwa kwakadaro kune kupenga kwevana vakapuruzira ...
- Kuda kwako mutengo mamiriro mutambo wemisasa nemafungiro makuru.
Imba yekutamba nzvimbo
YAKAKWANA mubatanidzwa wemuchadenga uye mutsva maitiro, iyoImba yekutamba nzvimbo icho chiratidzo chebudiriro muchibvumirano chakakwana nezvatinoda zvedzidzo. Wongorora hupfumi hwenzvimbo uye mikana yakawanda yeiyonzvimbo yekutamba mukati zvinobudirira sezvavanokwezva. Semitambo yedu inonakidza, iyo nyanzvi yemitambo mamiriro Inoonekwa nekukura kwevana vadiki.
NYAYA DZAKANAKA, zvese zvakasarudzika uye Snobbish, izvi Rwizi rwesango inotungamira iwe mukuzorora uye kuzorora. Mumakwara evashambadzi, iyo rwizi rwesango ine tambo uye yekumwe nzira yakamirira iwe munzvimbo yekudenga. Anoda zvekutsvaga uye nengano, kurudziro haisi kushayikwa munzvimbo inoshamisira ye Wakasviba rwizi ou Inononoka Rwizi.
- Tsvaga mufaro wesango, rinotyisa rwizi!
XXL dziva rekushambira rakakomberedzwa
HAGADZIDZO YENhaka yeiyi hombe dziva yakavharwa yemisasa inoratidza siginecha yechokwadi yekufambira mberi kusingaenzanisike. Zveizvi dziva rakakomberedzwa ngatitarisei pakureba kwenguva. Chokwadi, iwe uchachichinjisa icho kuvana vako! Ichisiya mucherechedzo wayo pachiitiko chenyika dzese, AquaSlide yasvika panhongonya yekugadzwa mudziva rekushambira rakavakirwa superstructure.
- Bvunza zita remazita yekushambira yakakomberedzwa AquaSlide ine rupo dhizaini.
RUNAKO NERUXURY zvinosimbisa iyo Midziyo yedziva. Fashoni haisisiri mubati wezviroto asi yakakosha. AquaSlide, musiki wemamiriro ekunze uye kugara zvakanaka, inoita kuti iwe uzive iyo dziva fanicha yakavandudzwa kune kuravira kwevatengi vako. Yedu inoshamisa muunganidzwa wedziva fanicha inopindura kune inoshamisira fungidziro.
- Ongorora fenicha yedziva rekushambira, Zvitaera uye zvikamu zvekunaka.
Kukundikana kusimudzira zviroto zvako zvehunhu, ngativhenekesei kutarisisa pane yedu Multi-brand boka.
Nhanho pamberi pezvinhu zvitsva, shamwari yedu yepamoyo inotora hwema hwechokwadi nezve edu Makore makumi matatu ebasa.
AquaSlide, inotanga kusimudzira yakatambanuka nzvimbo yekushambira michina muEurope, AquaSlide inoshanda se mvura yemasiraidhi inogadzira, yekushambira slide, paki yemvura inotsvedza uye mutambo wemvura.
AquaSlide ikozvino ine chinzvimbo chakakurumbira se dziva slide mugadziri France uye pasirese, inosimudzira iyo chivakwa chekutamba, nzvimbo yemukati yekutamba asiwo rwizi rwesango, dziva rakakomberedzwa nemidziyo yedziva.
Yedu dhizaini hofisi inogara ichigadzirisa mhinduro kumapurojekiti ako, inotsigira iwe padanho rega rekudzidza kwako uye inotora zvaunosungirwa.
Iyo yekuziva-kwazvikwata zvedu zvakasiyana siyana zvinosangana nezvinodiwa zvakanyanya uye zviyero zve nyanzvi yemvura inotsvedza yakabatana nekutengeserana kwakanyanya.
AquaSlide iri kwese kwese muzvikamu, mahotera ekunze nemapaki emvura ane portfolio yezvinongedzo kuchikwereti chayo.
Chirongwa chega chega chinoratidza nguva yacho ...
... edu ndiwo mareferenzi
+ 33 9 60 35 18 30 XNUMX
14 chemin du BOLS - 34150 Puéchabon (Furanzi)
Vhura slide yemvura
Multi-track yemvura inotsvedza
Spiral mvura inotsvedza
Fast mvura inotsvedza
Mvura yemhuri inotsvedza
Tube mvura inotsvedza
U-yakaumbwa mvura inotsvedza
Pombi yemvura inotsvedza
Indoor mvura yemasiraidhi
Slide kuisa pasi
Camping yemasiraidhi mugadziri
Mvura paki yemasiraidhi inogadzira
Hotera toboggan inogadzira
Mvura inotsvedza vhidhiyo
Mvura yemasiraidhi kit
Masitepisi uye Gateway mune kit
Dziva diki slide
Yakarurama dziva inotsvedza
Kushambira dziva kutsvedza
Slide dziva chubhu
Slide dziva inotsvedza
Chitoyi chidiki chemvura
Mutambo wemvura wevana
Mutambo wemvura wevakuru
Chidhori chemvura chevashandi
Mvura yemumvura maumbirwo
Yakakura mvura mamiriro
Chimiro chidiki chemumvura
Yemvura mutambo wevhidhiyo
Ngarava yemvura yepirate
Mini chikepe chemvura paki
Pfuma chitsuwa chemvura paki
Spacehip mvura paki
Rocket mvura paki
Sango remvura musango
Chateau paki yemvura
Pasi pemvura paki yemvura
Mini mvura inotsvedza
Mini mvura inotsvedza vhidhiyo
Nzvimbo dzemvura dzemumvura
Mvura jet paki
Yakaoma yekutamba munda
Mvura yemumvura zvigadzirwa
Mugadziri wematoyi emvura
Mvura yemumvura yekutamba
Mvura toyi chimiro dhizaini
Dhizaini yemvura inogadzira
Mugadziri wematoyi emvura emisasa
Mvura paki mutambo mugadziri
Chimiro chidiki chemutambo
Maitiro evana ekutamba
Kunze kwekutamba mamiriro
Simbi yemutambo mamiriro
Mapurasitiki mutambo mamiriro
Tubular mutambo mamiriro
Vhidhiyo chimiro kunze kwemutambo
Multi chiitiko chiitiko chimiro
Dingindira mutambo mamiriro
Maumbirwo ekutamba kosi
Tamba chimiro nesiraidhi
Tamba chimiro chemusasa
Vhidhiyo yemutambo dhizaini ine slide
Midziyo zvivakwa mitambo
Tamba dhizaini yekugadzira
Yevana yekutamba mamiriro dhizaini
Mugadziri wekambi yemitambo musasa
Nzvimbo dzekutamba dzemukati
Nzvimbo diki yekutamba yemukati
Imba yekutamba yevana
Simbi yekutamba nzvimbo
Nzvimbo yekutamba yepurasitiki
Tubular yekutamba nharaunda
Yemukati slide nzvimbo yekutamba
Multi-chiitiko nzvimbo yekutamba
Dingindira yekutamba nzvimbo
Nhandare yekutamba nemasiraidhi
Nhandare yekutamba yekudzika musasa
Nzvimbo yekutamba nemabhora
Vhidhiyo yekutamba nzvimbo ine slide
Imba yekutamba michina
Imba yekutamba paki
Indoor play park mugadziri
Imba yekutamba nzvimbo inogadzira
Kambi yemitambo yekutamba
Hotera nhandare inogadzira
Chakagadzirwa nedombo rekushambira
Rwizi rwesango video
Huru yekushambira yakakomberedzwa
Kambi yekushambira yakakomberedzwa
Chigaro cheimba yekutandarira
Shock inotora pasi
Chigaro chekusimudza padziva revakaremara
© Copyright 2019 - Aquaslide.fr - Kodzero dzose dzakachengetedzwa - rupawo - tos - CGV
ZVINHU ZVITSVA ZVINOTANGA PANO
AquaSlide inzvimbo yekutengesa yepamhepo yemahotera ekunze, misha yezororo nenzvimbo dzekuzorora. Indasitiri yehotera, nharaunda ... AquaSlide yakanyatsokodzera kumisasa, madziva ekushambira, asiwo makirabhu emitambo, mapaki emvura, nezvimwe.
Kufanana nemasiraidhi edu epaki yemvura, kushambira masiraidhi uye tsika yemasiraidhi emvura, tsvaga kukosha kweedu mitambo yemvura, nhandare uye tamba zvivakwa.
Ruremekedzo rwakatambanudzwa kuitira kubatsira nzizi dzesango uye fanicha yemadziva ekushambira mukuwedzera kune chikamu mvura yemasiraidhi inogadzira yakagadzirirwa musasa.
AquaSlide uye yayo dhizaini hofisi, mumiriri wepurojekiti yako, inovimbisa yakanakisa sevhisi / kuvimbika / chengetedzo uye mvura yemasiraidhi mitengo yemhando yakanaka.
Tsvaga yakanakisa Aquaslide chirongwa, kumbira yakasarudzika makotesheni kana odha online.
Simbisa nzvimbo yako yekunakidzwa nekufambisa kune kuravira kwe aquaslide.fr
Uye tsvaga chikamu chedu tsika yemasiraidhi inogadzira AquaSlide